IATA Travel Pass waxay aqoonsataa shahaadooyinka COVID digital ee EU iyo UK
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Aviation » IATA Travel Pass waxay aqoonsataa shahaadooyinka COVID digital ee EU iyo UK
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka UK • Wararka kala duwan
EU Digital COVID Certificate (DCC) iyo UK NHS COVID Pass ayaa hadda lagu ridi karaa IATA Travel Pass sida caddaynta la xaqiijiyay ee tallaalka safarka.
IATA ama EU Certificate COVID Digital (DCC) iyo UK NHS COVID Pass.
Qabashada shahaadooyinka Yurub iyo UK iyada oo loo marayo IATA Travel Pass waa tallaabo muhiim ah oo hore loo qaaday.
Is -waafajinta heerarka tallaalka dhijitaalka ah ayaa lama huraan u ah inay taageeraan dib -u -bilaabista duulimaadka ee nabdoon oo la miisaami karo
Ururka Gaadiidka Cirka ee Caalamiga ah (IATA) ayaa ku dhawaaqay in Shahaadada COVID Digital Digital (DCC) iyo UK NHS COVID Pass hadda lagu ridi karo IATA Travel Pass sida caddaynta la xaqiijiyay ee tallaalka safarka.
Socotada haya a EU DCC or Kaarka COVID ee NHS -ta UK hadda waxay heli karaan macluumaadka safarka COVID-19 oo sax ah safarkooda, waxay ku abuuri karaan nuqul elektiroonig ah oo baasaboorkooda ah waxayna ku soo dejin karaan shahaadadooda tallaalka hal meel. Macluumaadkan waxaa lala wadaagi karaa shirkadaha diyaaradaha iyo mas'uuliyiinta xakamaynta xuduudaha kuwaas oo yeelan kara hubin in shahaadada la siiyay ay tahay mid dhab ah oo uu leeyahay qofka soo bandhigaya.
“Shahaadooyinka tallaalka COVID-19 waxay noqonayaan shuruud baahsan oo loogu talagalay safarka caalamiga ah. Qabashada shahaadooyinka Yurub iyo UK iyada oo loo marayo IATA Safarka Safarka waa tallaabo muhiim ah oo horay loo qaaday, oo siineysa fududeynta dadka socotada ah, run ahaanshaha dowladaha iyo hufnaanta shirkadaha diyaaradaha, ”ayuu yiri Nick Careen, Ku -xigeenka Sare ee IATA ee Badbaadada iyo Amniga Hawlgallada.
Is -waafajinta Heerarka Tallaalka Dijital ah
Is -waafajinta heerarka tallaalka dhijitaalka ah ayaa lagama maarmaan u ah inay taageeraan dib -u -bilaabista duulimaadka ee nabdoon oo la qiyaasi karo, ka fogow safafka madaarka ee aan loo baahnayn iyo hubinta khibrad rakaab oo siman. IATA waxay soo dhaweynaysaa shaqada ay qabteen Guddiga Midowga Yurub ee horumarinta, waqtiga diiwaangelinta, nidaamka DCC ee EU -da sidaasna lagu jaangooyay shahaadooyinka tallaalka dhijitaalka ah ee Yurub oo dhan.
Iyada oo laga duulayo guusha EU DCC, IATA waxay ku boorineysaa Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) inay dib u eegaan shaqadooda si loo horumariyo heerka tallaalka dhijitaalka ah ee caalamiga ah.
“Maqnaanshaha halbeeg caalami ah ayaa aad ugu adkeyneysa shirkadaha diyaaradaha, maamulka xuduudaha iyo dowladaha inay aqoonsadaan oo xaqiijiyaan shahaadada tallaalka dhijitaalka ah ee socdaalka. Warshaduhu waxay ka shaqaynayaan arrintan iyada oo soo saarta xalal aqoonsan kara oo xaqiijin kara shahaadooyinka dalal shaqsiyeed. Laakiin tani waa geedi socod gaabis ah oo carqaladeynaya dib u bilaabashada safarada caalamiga ah.
“Iyada oo gobollo badan ay soo saarayaan barnaamijyadooda tallaalka, qaar badan ayaa si degdeg ah u raadinaya inay hirgeliyaan xalal farsamo si ay u siiyaan shahaadadda tallaalka muwaadiniintooda markay safrayaan. Maqnaanshaha heerka WHO, IATA waxay ku boorineysaa inay si dhow u fiiriyaan EU DCC sidii xal la xaqiijiyey oo la kulma hagitaanka WHO oo gacan ka geysan karta dib -u -xiridda adduunka, ”ayay tiri Careen.
PYU wuxuu leeyahay,
Ogosto 19, 2021 markay tahay 16:05
Marka qaar badan oo ka mid ah Aasiya iyo Koonfurta Bari Aasiya aysan lahayn ikhtiyaar ku saabsan waxa tallaallada laakiin in lagu tallaalo wax kasta oo tallaal ah oo waddamadu heli karaan, waa caddaalad darro aad u weyn waddamada reer Galbeedka tusaale ahaan Csnada iyo EU inaysan aqoonsan tallaallada Shiinaha ee Sinovac oo ah socdaalayaal si buuxda loo tallaalay. In badan oo naga mid ah ayaa awood u leh inay safraan wax badan markaa.